Dib u bilaabista dalxiiska magaalooyinka Yurub hadda tallaabo adag si loogu dheellitiro baahiyaha dadka deegaanka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Yurub » Dib u bilaabista dalxiiska magaalooyinka Yurub hadda tallaabo adag si loogu dheellitiro baahiyaha dadka deegaanka
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Czechia Breaking News • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Wararka Nederland • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Shopping • Wararka Spain • Wakhtiga waarta • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Dib u bilaabista dalxiiska magaalooyinka Yurub hadda tallaabo adag si loogu dheellitiro baahiyaha dadka deegaanka.
Maaddaama magaalooyinka caanka ah ee Yurub ay si buuxda dib ugu furan yihiin dalxiisayaasha caalamiga ah, mas'uuliyiinta dalxiisku waa inay isticmaalaan muddadan koritaanka cusboonaysiinta si ay u helaan dheelitirka saxda ah ee u dhexeeya faa'iidada dhaqaale iyo hubinta tayada nolosha wanaagsan ee dadka deggan.
Faafida caalamiga ah ee COVID-19 waxay saameyn weyn ku yeelatay dalxiiska magaalooyinka Yurub.
Dadka reer Yurub ayaa bilaabay inay ku laabtaan magaalooyinka waaweyn ee Yurub iyagoo ku kalsoon inay laba jibaaran yihiin.
Kahor masiibada COVID-19, kororka joogtada ah ee dalxiiska caalamiga ah ee magaalooyinka sida Barcelona, ​​Amsterdam iyo Prague ayaa caro ka dhex dhaliyay bulshooyinka maxalliga ah.
Tan iyo markii ay soo baxeen gaadiid-qaadayaal jaban iyo qaabab miisaaniyadeed oo hoy ah, caannimada dalxiiska fasaxa magaalada ayaa si aad ah kor ugu kacay socdaalka qaaradaha ee Yurub oo dhan. Sida laga soo xigtay falanqeeyayaasha warshadaha, 38% jawaab bixiyaasha ayaa sheegay in ay caadiyan qaataan safarka noocaan ah, taas oo ka dhigaysa safarka saddexaad ee ugu caansan caalamka, ka dambeeya dalxiiska qorraxda iyo xeebta iyo booqashada saaxiibada iyo qaraabada (VFR).
Kahor faafitaanka COVID-19, sanad-sanad ka-sannadka joogtada ah (YoY) wuxuu kordhiyaa dalxiiska caalamiga ah ee magaalooyinka sida Barcelona, Amsterdam iyo Prague waxay ka cadhoodeen bulshooyinka deegaanka, iyaga oo cadaadis ku abuuray dawladaha hoose.
In kasta oo masiibadaas ay saameyn weyn ku yeelatay dalxiiska nasashada ee magaalada, iyada oo dadka safarka ah ay u janjeeraan inay ka fogaadaan meelaha dadku ku badan yahay ee 2020 iyo 2021, reer Yurub waxay bilaabeen inay ku noqdaan magaalooyinka waaweyn ee Yurub oo dhan iyagoo kalsooni ku qaba in labanlaab la jabiyo iyo xannibaadaha ayaa yaraanaya. habacsanaan.
Maaddaama magaalooyinka caanka ah ee Yurub ay si buuxda dib ugu furan yihiin dalxiisayaasha caalamiga ah, mas'uuliyiinta dalxiisku waa inay isticmaalaan muddadan koritaanka cusboonaysiinta si ay u helaan dheelitirka saxda ah ee u dhexeeya faa'iidada dhaqaale iyo hubinta tayada nolosha wanaagsan ee dadka deggan. Tusaale ahaan, dib u furitaanka Prague Dalxiiska caalamiga ah wuxuu noqon doonaa mid xiiso leh in la kormeero.
Iyadoo uu jiro cudurka faafa, mas'uuliyiinta dalxiiska ayaa soo galay Prague waxay sheegeen inay damacsan yihiin inay wakhtiga dhimista u isticmaalaan inay abuuraan noocyo badan oo dalxiiska magaalada ah mustaqbalka, taas oo raali galinaysa dadka deegaanka. Kahor faafitaanka faafa, magaaladu waxay haysatay arrimo ku saabsan dalxiisayaal qalafsan oo xiraya bartamaha magaalada oo hoos u dhigaya tayada nolosha dadka maxalliga ah. PragueDiirada cusub ee ay keentay masiibada ayaa lagu sheegay inay tahay soo jiidashada dalxiisayaasha 'qiimaha sare leh' ee joogi doona waqti dheer, kharash badan ku bixin doona, oo guud ahaan u dhaqmi lahaa qaab mas'uuliyad badan leh inta lagu jiro safarkooda.
Rabitaankan ka imanaya saraakiisha dalxiiska ee Prague ee ah in ay dib ugu soo bandhigaan ololeyaal suuq-geyneed oo ay ku riixaan xeerar cusub oo suurtagal ah ayaa noqon kara waqti gaaban maadaama saameynta dhaqaale ee masiibada ay sii socoto. Iyada oo dalxiiska soo gelaya ee Jamhuuriyadda Czech uu wali yahay qayb yar oo ka mid ah heerarka masiibada ka hor, Ururka Dalxiiska Czech wuxuu ugu baaqay mas'uuliyiinta Prague inay si dhakhso leh wax uga qabtaan si looga hortago dhibaato dhaqaale.
Taageerada maaliyadeed ee la xidhiidha COVID hadda waxay ku dhamaanaysaa ganacsiyo badan oo la xidhiidha dalxiiska oo Yurub oo dhan ah, magaalooyinka waaweyn ee Yurub waxa laga yaabaa inay mar kale diiradda saaraan tiro ka badan tayada si loo kiciyo soo kabashada dhaqaalaha.
Isbeddelkan suurtagalka ah ee istaraatiijiyada ayaa laga yaabaa inay ka cadhaysiiyaan dad badan oo deegaanka ah oo aan ku tiirsanayn dalxiiska dakhli-abuurista. Si kastaba ha ahaatee, waxaa loo baahan yahay in la qiro in dad badan oo deegaanka ah ay sidoo kale u ololayn doonaan soo celinta dalxiiska ballaaran si ay u horumariyaan dhaqaalahooda shakhsi ahaaneed. Soo noqoshada buuxda ee dalxiiska fasaxa magaalada sanadaha soo socda ayaa ka dhigaysa ficil isku dheelitiran oo adag masuuliyiinta magaalada, iyo mid had iyo jeer keeni doona muran.